Yintoni ezisa iPlexEarth 2.0 -Geofumadas
Ikhaya/AutoCAD-AutoDesk/PlexEarth kuzisa 2.0
NgoNovemba wonyaka odlulileyo Ndenze uvavanyo ye-1 version Izixhobo zePlexEarth ze-AutoCAD, Phakathi kwezinto ezintsha ezibandakanya ukusebenzisana kwe-AutoCAD kunye neGoogle Earth. Kulesi sihloko kukho izinto ezinje Iziqu, Kmler, Ukubala, kml2kmlLo mzekelo molekyuli, ngokokubona kwam, omnye inkqubela kwendakhe ndakubona zombini kumaqonga, ukuba ukulahlekelwa ngokukhanya uthathe ithuba iimpawu ezaziwayo-kakuhle ezingenamandla ze AutoCAD ze ugcwalise izikhewu ukuba une GoogleEarth.
Ndisandula kuvavanyo lwe-beta lwenguqulo 2.0, eza kuphuma kungekudala. Zisuka nje, kubonakala ngathi kuphuhliso olunomdla, nazi iimbonakalo zam zokuqala.
Le nguqulo iza kwi-AutoCAD 2010, kwaye ilungele ukuqhuba kwi-AutoCAD 2011 ukuba lixesha kubandakanya ukukhanya. Kucacile, ukuba iyasebenza kwi-Civil3D okanye esinye isicelo esivela kuhlobo lwango-2010, andiqinisekanga ukuba ngaba ngo-2009 kwaye ngokuqinisekileyo, ayisebenzi nakwezinye iinguqulelo zangaphambili njengoko belisenza ilifa lalo.
Uphuhliso, emva kokuba lufakwe, lucaciswa ngokuzenzekelayo njengethebhu entsha ibhendi, kunye neenzuzo ezicacileyo zalo mxholo, okuvumela ukuba uvule iipaneli okanye ucime ngendlela efanelekileyo.
Oku kuquka uguqulelo
Idizayini yepaneli yenziwe "Ecacileyo", yahlulwa ngaphantsi ukulandelelana aluncedo kakhulu, kangangokuba le nguqulelo I kuvavanywa ngaphandle amanqaku encwadi okanye ukukhululwa kwaye phantse nge intuition kunokuba kulindelwe ukuba phambili, ndiye ukuqonda ukukhonza amaqhosha.
Ukulungelelanisa inkqubo Apha, ngaphandle kokubuya okukhulu, kuvumela ukukhetha ilizwe kunye ne-UTM.
Imifanekiso. Nazi iindlela onokukhetha kuzo ukwenza imifanekiso eqingqiweyo, inokuthi ikhutshwe kwipoligoni ekhoyo, izotywe kubhabho, ecaleni kwendlela, ukwenza i-mosaic ngokwendlela emiselweyo.
Ikhamera. Nantsi imisebenzi yokujolisa kunye nokuvumelanisa, nokuba kungokuya kuGoogle Earth ngokusekwe kwi-AutoCAD deployment okanye ngasemva. Kule nto inokufana okuthile kwinto eyenzayo Microstation kodwa loo nto iyancipha.
Yakha. Oku kutsha kwaye kuhlaziyiwe kakhulu kwinto ebikade ikwenza. Unokwenza amanqaku, iindlela, iipoligoni, ngomthetho wonke kwi-AutoCAD kwaye ziya kuhlaziywa ngokuzenzekelayo kwi-kml. Inokhetho lokuvelisa izitayile zamanqaku ngokusekwe kwiimpawu ze-AutoCAD, uGoogle Earth kunye nendlela ye-html.
Ngokukodwa lo msebenzi uwukudweba kwiGoogle Earth, ngokuchanekileyo kwe-AutoCAD. Kulungile ekupheleni kokusebenza akukho nto ishiywe kwi-dwg, kuphela kwi-Google Earth, kunye nokuwaneliseka kokukwenza kwi-AutoCAD.
Digitize. Le picket, ivumela ukuzoba kuGoogle Earth, amanqaku, iipolylines kunye ne-3D polylines eziya kugcinwa kwi-dwg. Okubandakanya Uxhasa i-snap! kwiGoogle Earth, kwaye oko kutsalwayo kudalwe kwi-dwg.
Le maski yokufaka ikhompyuter inomdla kakhulu, nje ukuba uqale umyalelo uyayenza ikhulule ukusondeza kuzo zombini iinkqubo ukuqinisekisa ukungqinelana. Iqhosha lasekunene likuvumela ukuba utshintshe phakathi kwemisebenzi okanye uhlaziyo oluye lakukhulula kwintloko ebuhlungu ngenxa yobuqhetseba obutshaywe ngabahlobo.
Kwimvelaphi, ingqamaniso yeDala, ukudweba kwi-dwg, ngokuchofoza kwiGoogle Earth. Ekugqibeleni, into iya kutsalwa kwi-dwg, akukho nto ngeGoogle Earth.
Thumela kwiGoogle Earth. Apha ungathumela izinto kwi-kml, kwaye ikwavumela ukuba uthumele imifanekiso. Le yokugqibela ilungile, ukuthumela ngaphandle imifanekiso kwi-AutoCAD; zimbalwa (zimbalwa) izixhobo ezenza oku.
Umhlaba kunye noNyaka. Apha bayitshaye iluhlaza, njengoko bongeze imisebenzi yokwenza imodeli yedijithali yomhlaba, umphezulu kunye nemigca yentsontelo evela kwidatha yeGoogle Earth kuphela.
Unokungenisa ngaphakathi kwiGoogle Earth, udala igridi, kodwa ixhasa nemimiselo yendawo eyenziwe yiprogram (njengaye 3D civil), Izinto ezenziwe CAD (amanqaku, polylines 3D, breaklines, umnatha polyface, imida outer / engaphakathi, njalo-njalo), nto leyo enika AutoCAD amathuba elula ukuba kungenziwa kuphela Land okanye Civil.
Unako ukubala ubungakanani phakathi kweendawo, ukudala amaphupha ukusuka ngqa isicatshulwa, ilebula yombambano ... kufuneka uyibone! kuba uqinisekile ukuba uninzi.
Ngathi. Apha kuya kufuneka uqwalasele iiparameter ngokubanzi, ezinje ngomendo apho imifanekiso igcinwe khona, ixesha lokuhamba likaGoogle, ukusebenza kwelayisensi, njl.
Ngakanani na kangakanani
okwangoku ndivavanya uguqulelo lwe-beta, nangona ngokoluvo lwam ilungele ukusetyenziswa. Inezinto ezininzi ze-smart esele zakhiwe ngaphakathi, ezinje:
Xa umfanekiso ufanele ulandelwe, ukuba umhlaba usebenza, uyawuyeka ngokuzenzekelayo ngomyalezo owamkeleyo / owenayo.
Ngakolunye uhlangothi, ukuba ufuna ukungenisa imodeli yedijithali evela kwiGoogle Earth, ikwazisa ukuba indawo ayisebenzanga, ikuvumela ukuba uyamkele okanye uyinqabele inguqu.
I guess xa ngokusungula uguqulelo esitalini ziya kufumaneka le ncwadana, kwaye ayinakulimaza ukuba kwabangela ulwimi iSpanish, kuba uvakalelwa ukuba esi sixhobo nangona wazalwa eGrisi, unokuba wondamkela okulungileyo okusingqongileyo kokufika; ucinga ukuba Google Earth weza ukusombulula yokunqongophala data kwintsimi ezininzi.
Andilazi ixabiso okwangoku, kwaye andicingi ukuba baya kuya kwilayisensi yangaphambili edlulileyo ngokusekwe kwintengiselwano, ebonakala ingasebenzi kakhulu kwezinye iindawo. Ndiyathemba ukuba baya kufumana ilayisensi esisigxina, kule meko ndibuza:
Kufuneka ukuba isicelo esinje sifaneleke kangakanani?
Eli nqaku lithetha nge iindaba ezivela kwi-PlexEarth 2.5
I-25,43 $ + Iindleko zokuthumela